Uhuru Kenyatta Oo Lagula Taliyay inuu Garab Weydiisto Farmaajo | Gaaroodi News
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo (bidix) iyo madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta (midig)
“Soomaaliha hadda waxay muujisay door hoggaamin ah. Annagu dhankeenna waan uga caawinay xallinta qalalaasaha, hadda annaga ayaa ka rabna garab. Mudane madaxweyne, telefoonka qabso, wac walaalkaa – madaxweynaha Soomaaliya – u oggolow inuu imaado, la wareego dadka aan tuhunsan nahay, sidaasna gacan ha uga geysto dardar galinta dacwaddooda, sababtoo ah xabsiyadiisii ku meel gaadhka ahaa way maran yihiin, dadkii horay ayaa xabsi weyn loogu wada diray, kuwan ha joogaan xabsiyada ku meel gaadhka ah ee halkaas ku yaalla.” Ayuu yidhi Mututho.
“Xitaa Soomaaliya way leedahay ciidan, maxaan u aadnaa halkaas, ciidamada cirka way leeyihiin, ciidamada badda way leeyihiin, waa daris wanaag uun. Haddii aan annagu isku filnaan weynay, dariska ayaan caawinaad u doonaneynaa, ma dhahayno dacwad ooge guud ma lihin, madaxa caddaaladda ma lihin, ma dhaheyno ma lihin guddi la dagaallama musuqmaasuqa iyo hay’adaha kaleba, dariskaaga waad ka dalban kartaa garab, madaxweynaha Soomaaliya wuu noogu deeqi karaa dambi baareyaashiisa, way yaqaannaan sida arrimahan loola tacaalo.” Ayuu sii raaciyay.
Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay muujisay dadaal xooggan oo ku aaddan la dagaallanka musuqmaasuqa, sida ay tabiyeen warbaahinta maxalliga ah. Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya, Suleymaan Maxamed Maxamuud